Iintsuku ezingama-36 zohlobo: Hlanganisa bonke abaYilo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Esi siganeko simangalisayo sazalwa malunga neminyaka emi-3 eyadlulayo xa Nina Sans kunye noRafa Goicoechea Kwenzeke kubo ukuba bapapashe imisebenzi yabo yoyilo lwegraphic kwinethiwekhi yazo. Injongo yakhe yayikukwenza kancinciñukupapasha umsebenzi abawenzayo Kancinci kancinci, kodwa izixa zabalandeli, ukuthandwa kunye nezinye izimvo ezaqala ukuzuza, zambeka kwindlela eya kudumo.
Umhla wombutho walo msitho wenzeka ukusukela ngoFebruwari 21 ukuya kuMatshi 28, 2017 kwaye kwiintsuku ezingama-36 ezidlulileyo zokubonisa, nabani na othathe inxaxheba kule fowuni ngokufaka ubugcisa bakhe, unesikhundla esincinci ekuqaphelweni kwamazwe aphesheya. Ayinamsebenzi nokuba unetalente kangakanani na okanye ukuba uqala nje ngokuchwetheza, yintoni enomdla yinto enye, ngoku uyazazisa.
1 Uyilo, imisebenzi kunye neMiboniso yoBugcisa: Kukho iNcinci kuyo yonke into
2 Oku kuqeshwa kusemthethweni kwaye kuyinto ecocekileyo
3 Uhlelo olulandelayo: u-2018 uyeza
4 Indlela elula yokuzazisa kunye nokukhangela umsebenzi wasimahla: Iintsuku ezingama-36 zohlobo
Uyilo, imisebenzi kunye neMiboniso yoBugcisa: Kukho iNcinci kuyo yonke into
Ngumceli mngeni onzima kakhulu, yitsho ukuba abayili bemizobo abanamava abangafuni nje ukuzazisa, kodwa kunoko funa ukuqeshwa ziinkampani ezinkuluhayias Uyilo. Imiceli mngeni imelwe bubungakanani bemisebenzi elayishwe ku-Instagram kunye nomgangatho wobugcisa ababonisa abaphulaphuli babo.
Umhla wokubonisa izinto zezona zinto zikufutshane ekuqokeleleni amagcisa egrafiti ali-100 epakini kunye neendonga ezininzi ezingenanto zilungele ukupeyinta. Ngalo lonke ixesha losuku, uya kuba nakho ukonwabela imisebenzi eyahlukeneyo yobugcisa oko kuphakama kancinci kancinci kwaye kubonakala ngathi bangcono kunangaphambili.
Le projekthi ijolise ekubeni yindawo apho i ubuchule bokwenza nokuyilaíistiki unokukhuthazwa ixesha elininzi. Kubalulekile ukuba wazi ukuba ukuthatha inxaxheba akufuneki kuhlale iintsuku ezingama-36 kwaye nangona kunzima kakhulu, kuphela bambalwa kakhulu abakwazileyo ukubonisa ubugcisa kwi-36 días, Ukwenza ukuvezwa phakathi kwe-2 kunye ne-3 ngemini yezixhobo zakho
Oku kuqeshwa kusemthethweni kwaye kuyinto ecocekileyo
Oku kuqeshwa kulindelwe kakhulu ngabaqulunqi nakwilizwe lobugcisa bemizobo, kangangokuba zibonwe ngabaqulunqi ngokwabo kwaye ol imidlaloíiisimboli zobugcisa. Ukuba uyazi kakuhle ilizwe lobugcisa, uya kwazi ukuba sele zikho iilebheli ezixhonywe kwinethiwekhi yoluntu ukwenza iphulo lokwazisa kunye nokwazisa.
Imixholo onokuyifumana kukho imizobo emincinci yoyilo lwabo bazobi babalaseleyo okanye, izimvo zokuqala zomsebenzi wakho wexesha elizayo. Kuxhomekeka kukhetho lwakho, ungathandabuzi ukuba uyakufumana indawo oyithandayo.
Upapasho luye zonke iintlobo zepúesidlangalaleni, imiyalezo kunye nabaphulaphuli, Ke musa ukuphelelwa lithemba ukuba abakhange balayishe umxholo osithandayo!
Uhlelo olulandelayo: u-2018 uyeza
Ukuba ungumzobi kwaye ufuna abantu bakuqonde njengengcali ebaleni, ¡¡¡qala ngokwenza uyiloñezintsha kunye nobuchule! Injongo yesaziso kwangaphambili kukuba unokuhlala ixesha elide kunelo langaphambili kukhuphiswano, kuba ingcinga leyo!
Okukhona uhlala ixesha elide, kokukhona uya kukwazi ukubona kwaye ayizukuphela ngabahlobo bakho okanye abantu abakwaziyo, kodwa nabameli beenkampani ezinikele kwaba abanye. Zama ngomzamo omkhulu ibhombu kwigalariíukusuka kwi-Instagram ukuze okungenani umntu omnye ayazi into oyenzayo.
Indlela elula yokuzazisa kunye nokukhangela umsebenzi wasimahla: Iintsuku ezingama-36 zohlobo
Kwimeko apho ubungazi ngaphambili, ukuhlala kweentsuku ezingama-36 ukukhuthaza ubugcisa bakho kuya kuba simahla.
Kodwa kukho into ebalulekileyo kwaye, Ngexesha lokubhalisa kufuneka uhlawule umyinge obonakalayo wemali. Oku kungathathwa njengeinikelweón”Kwaye ngokungathi ayonelanga loo nto, iingqondi ezixhasa yonke le nkqubo zezona zifumana lukhulu koku kuqeshwa ngokwentengiso kunye nemali engenayo evela kubasebenzisi ababhekisa kubo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Iintsuku ezingama-36 zohlobo: Hlanganisa bonke abaYilo
Isikhokelo, ubukhulu kunye nezixhobo zokwenza imifanekiso kuthungelwano lwentlalo